Ihe Nnọchianya Nnu Na Ụzọ? Nri Sayensị nri Nu-Tek Azịza oku iji belata oriri sodium zuru ụwa ọnụ - Ụwa 2022
Ihe Nnọchianya Nnu Na Ụzọ? Nri Sayensị nri Nu-Tek Azịza oku iji belata oriri sodium zuru ụwa ọnụ
Ogologo oge ka akwadoro na anyị kwesịrị ibelata oriri sodium anyị. Sayensị nri Nu-Tek na-atụ anya iji usoro isi mkpịsị aka ahụ gwuo egwu site na iji nnọchi nnu dị mma.
Nancy Brown, onye isi otu American Heart Association kwuru, sị: "Iri oke sodium bụ ihe na-ebute ụzọ n'ịkwalite ọbara mgbali elu, nke bụ isi ihe kpatara ọrịa obi na ọrịa strok," ka Nancy Brown, onye isi otu American Heart Association kwuru, onye kpọkuru maka iji nwayọọ nwayọọ belata nnu..
Site na nyocha nke 2009, nke e bipụtara na International Journal of Epidemiology, nke na-egosi na oriri sodium dị elu dị n'ụwa nile, Nu-Tek eguzobewo ngbanwe ya n'oge dị mma.
Dị ka ọtụtụ ndị nọchiri anya, dị ka ndị maka shuga, bụ ndị na-ewu ewu na nso nso a, Nu-Tek Salt na-enye 1: 1 ngbanwe nke nnu tebụl mgbe niile maka ngwaahịa ha. Otú ọ dị, n'ihi ịdị ukwuu nke ekpomeekpo ngwaahịa ahụ, ngwaahịa a na-enyere aka ibelata oriri nnu site na pasent 25 ruo 50.
Ihe nzuzo ya dị na ọdịnaya nke ogige ya.
Ihe mejupụtara nnu tebụl bụ ihe a na-akpọ sodium chloride. Mgbe sodium chloride na-abanye n'ime ahụ, ahụ na-agbaji ya ngwa ngwa ma jiri ya mee ihe. Otú ọ dị, nnu Nu-Tek, ma ọ bụ Nut-Tek Potassium Chloride (NPC), bụ nke potassium chloride ogige mejupụtara kama.
Ọ bụ ezie na potassium chloride ka na-eme n'ụzọ nkịtị, anụ ahụ nwere obere ojiji maka potassium karịa sodium wee na-amịkọrọ ya na ọnụ ọgụgụ dị ala. Na ole na ole ojiji ahụ na-eme ka potassium bụ nti. Achọpụtala potassium na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa obi, ebe sodium na nnu mgbe niile na-ebuli ihe ize ndụ ahụ.
A kwadoro NPC ka o jiri ya mee ihe n'ụdị nri dị iche iche, dị ka anụ na ngwaahịa esi nri, ma na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịfesa ntakịrị nnu n'ime ofe ma ọ bụ n'elu fries. Maka ndị na-enweghị ike ịhapụ ezigbo nnu, Nu-Tek na-enye NPC ya n'ime oke osimiri ma ọ bụ nnu mgbe niile.
Usoro Nu-Tek bụ ihe kwesịrị ịja mma - nke mere na Bill Gates akwadola ọtụtụ mbọ iji nyere ndị mmadụ aka ịnya isi n'ihe ndochi nnu na pụọ ​​na nnu adịghị mma na nke ọdịnala.